Hacked Subdirectories Na WordPress saịtị - Ọkachamara Semalt na New Spam Omume
Na nso nso a, e nwere okwu gbasara ihe mere SEO spam, nke gụnyere itinye nke ọdịnaya obi na subdirectories na saịtị WordPress. Ndị Spammers na ndị na-agba ọsọ na-eji oji nwa okpu SEO maka iji ihe nkesa na nchekwa nchekwa. Ha na-etinye ihe odide spam na WordPress gị ma mee ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịdebanye aka na ibe weebụ.
Alexander Peresunko, ọkachamara kachasị elu site na Semalt , kọwakwuru ebe a na ụfọdụ nsogbu dị n'akụkụ a.
weebụsaịtị spam na-akwalite ngwaahịa na ọrụ n'otu oge. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ saịtị spam na-emepe ugogbe anya maka anwụ na ngwaahịa ndị na-emepụta ihe, na-adọta ndị mmadụ na mmemme ego ego ndị na-achịkwa. Usoro a na-ewepụta site na usoro mmemme ndị ọzọ n'ihi na ọ na-ebute ndị ọrụ na njikọ dị iche iche na obi ọjọọ. Ọ nwere ike imebi saịtị ha ma leghaa ozi kaadị akwụmụgwọ ha na ịntanetị.
Ndị na-agba ọsọ na spammers na-ekpuchi aghụghọ site na ịche ebe nrụọrụ weebụ spam n'ime ntinye aha nke saịtị ndị ziri ezi, ihe kachasị iwe bụ na ndị webmasters ma ọ bụ ndị nwe saịtị ahụ adịghị ahụ ya. Na oge, ọ dị mkpa iji nyochaa nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma mee mgbanwe ụfọdụ na akaụntụ WordPress gị. Ị nwere ike iji Google Search Console iji chọpụta ma ọ bụrụ na ndị ahụ na-awakpo ahụ na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ndị ọkachamara na Semalt na-akwado ngwá ọrụ a ka ndị ahịa ha chọrọ ịkwalite mma weebụ. Ọ bụrụ na ị hụ nza ajụjụ dị na igbe ntinye nke ụlọ ọrụ gị, enwere ike ịchọrọ gị na SEO mbanye anataghị ikike. N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị ụzọ isi chọpụta nsogbu a, ma ị ga - enwe ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ niile.
Ikwesịrị ka ndị omempụ ghara ịdaba gị ma jiri ụzọ dịgasị iche iche iji hụ na nchekwa na nchekwa gị na ịntanetị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị spammers na-awakpo saịtị gị site na edemede ederede na spam injections, nke siri ike ịchọta. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ụfọdụ ị ga - esi gbochie ndị na - agba ọsọ site na ịchekwa koodu ha n'ime saịtị WordPress gị.
Nnyocha nyocha, nke a na-akpọ dị ka ihe nkesa ihe, na-eji nyochaa ikpe nke ndị hackers na-awakpo ebe nrụọrụ weebụ gị iji baara atụmatụ SEO uru. Ọzọkwa, ha na-eji ojiji ejiji chaa chaa chaa chaa chaa chaa chaa chaa nke ị na-eji na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ gị search engine results. N'adịghị ka redirects dị nro, ụdị spam enweghị ike ịgbanwe ọdịdị na ọdịdị nke ebe nrụọrụ weebụ na-ebute ọrịa.